Amaphoyisa adubule abasolelwa ukuphanga | News24
Amaphoyisa adubule abasolelwa ukuphanga
Isithombe:SithunyelweAmaphoyisa adubule abasolwa ababili okubikwa ukuthi bebezama ukuphanga kwesinye sezitolo esise nkabeni yedolobha laseMgungundlovu ngoLwesithathu oledlule.
AMAPHOYISA adubule abesilisa ababili abasolelwa ukuzama ukuphanga kwesinye sezitolo esikumgwaqo u-Church enkabeni yedolobha laseMgungundlovu ngoLwesithathu oledlule, ngomhlaka 19 kuJulayi ngabo 3.30 pm ntambama.
Amaphoyisa athe oyedwa wabo udubuleke emlenzeni kanti omunye udubuleke esiswini. Aqhube ngokuthi labasolwa bephelezelwa ngomunye wesithathu bangene kwesinye sezitolo esise nkabeni yedolobha laseMgungundlovu bakhomba abasebenzi ngezibhamu befuna imali.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, u-Lieutenant Colonel Thulani Zwane uthe: “Kuvulwe icala lokuzama ukuphanga kwebhizinisi esiteshini samaphoyisa aseMgungundlovu.”
Uthe emuva kokuthi amaphoyisa ethole umbiko ngalesi sigameko aphuthumele endaweni yesehlakalo ngokushesha.
“Ngokwembiko kudubuleke abasolwa ababili kanti owesithathu umsolwa uphunyukile.
Kubikwa ukuthi abasolwa basabise ilungu lamaphoyisa ngokuthi bazolidubula. Abasolwa abalimale kulesi sigameko baboshiwe,” kusho uZwane.
Amaphoyisa athe umsolwa ophunyukile ubaleke ngemoto yohlobo i-BMW emhlophe.
UZwane uqhube wathi kodwa amaphoyisa agcine emtholile umsolwa wesithathu.
“Umsolwa wesithathu uboshwe ngalo ilanga lesigameko kanti utholakale nesibhamu esingekho emthethweni,” kusho uZwane.
Uthe abasolwa ababili bavele enkantolo ngoLwesihlanu ngomhlaka 21 kuJulayi kanti bagcinwe ngaphakathi kuze kushaye umhlaka 28 kuJulayi.
“UMfanafuthi Maphumulo, oneminyaka engu-20, kanye noSfundo Mkwanazi, oneminyaka engu-20, bavele enkantolo yeMantshi yaseMgungundlovu ngomhlaka 21 kuJulayi.
Umsolwa wesithathu oneminyaka engu-26 usasesibhedlela kanti ugadwe amaphoyisa kodwa kulindeleke ukuthi uzokhishwa esibhedlela ngoLwesibili, ngomhlaka 25 kuJulayi,” kusho uZwane.
Okhulumela abosizo lokuqala i-ER24 uWerner Vermaak uthe abasolwa abadubulekile kulesi sigameko baphuthunyiswe esibhedlela.